Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Waramay Dagaal Cadawga uu ku Hoobtay oo Ka Dhacay Kudunbuur
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka Waramay Dagaal Cadawga uu ku Hoobtay oo Ka Dhacay Kudunbuur
Wararka nagasoo gaadhaya wadanka Ogadenia gaar ahaan Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaallo dhowr ah oo ciidanka gumaysiga lagu qabjabiyay, waxayna wararka intaa ku darayaan inuu cadawga jab wayna lagu gaadhsiiyay dagaaladan socday todobaadkii lasoo dhaafay, halkaasoo lagag dilay cadawga ugu yaraan 35 askari iyo dhaawac farabadan oy kala tageen goobaha la’isku farasaaray. Dagaaladaa ayaa ka dhacay goobaha kala ah;
26/3/15 Deegaanka Kudunbuur oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa wayaanaha kudhexmaray waxaa jab aan aqiyaasi Karin loogu gaystay ciidankii gumaysiga dagaal kan oo ahaa mid socday modo badan ayaa ciidanka qabka jabsan ee gumaysigu soo uruuriyay lagaga dilay inta lahubo 20 askari 25 kalana waa lagaga dhaawacay. Dadka shacabka ah ee kusugan magaalada Qabridahare ayaa sheegaya in guud ahaan gobolka iyo wadankaba laga dareemay saamayntii uu gumaysiga kuyeeshay dagaalka kadhacay deegaankan u dhaxeeya Jugle iyo daris iyo Tuulada Kudunbuur oo ay ciidanka wayaanuhu kuwaayeen saraakiil sarsare.
22/3/15 Goladheerti oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 4 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/3/15 Qodaxlay oo dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidankii cadawga lagaga dilay 3 askari inta lahubsaday 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
27/3/15 mundulka oo dagmada dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.